SOMA oo soo gabagabeysay Tababar u qabatay Wariyayaasha Koofur Galbeed (Sawiro) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	SOMA oo soo gabagabeysay Tababar u qabatay Wariyayaasha Koofur Galbeed (Sawiro)
Tababarkan mudadda afarta maalinta ah uga socdey qaar ka mid ah Wariyaasha Koonfur Galbeed Magaalada Baydhabo waxaa xiritaanka ka qeyb galey Wasiirka Warfaafinta Ilyaas Saciid Qalinle,Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Koonfut Galbeed Maxamuud Maxamed Kheyre,Gudoomiyaha SOMA iyo qaar ka mid ah Agaasimayasha Idaacadaha Baydhabo.
Tirada wariyaasha tababarkan ka faa,iideystey oo gaarayay 20,waxaa ay ka kala socdeen Degmooyinka Maamulka sida Afgooye,Baraawe,Wallaweyn,Xudur iyo Magaalada Baydhabo,waxaana ay ku baranayeen habka tabinta doorashooyinka iyo Badqabka Wariyaha.
Gudoomiyaha Ururka Wariyaasha Koonfur Galbeed Muxidiin Xasan Maxamed ayaa uga mahadceliyey SOMA iyo IMS tababarka ay ku qabteen Magaalada Baydhabo,isagoona sheegey in xili baahi tababaradaas loo qabo deegaanka ka jirta lagu soo aadiyey.
Maxamed Cusmaan Makaraan oo ah gudoomiyaha Dalladda Warbaahinta Soomaaliyeed ayaa sheegey ay ku faraxsan yihiin in sidii ay uga talagaleen howshooda uga soo dhamaatey,isagoona sheegey in tababarkan kuwo la mid ah ay ku qaban doonaan xarumaha Dowlad Goballeedyada Dalka.
Waxaa uu Makaraan sidoo kale ku amaaney Wasaarada Warfaafinta Koonfur Galbeed gaar ahaan Wasiirka Wasaarada sida diiran ee inta tababarka socdey uga warhayay Wariyaasha tababarka qaadanayay.
Abuukar Badri Madaxa Barnaamijyada IMS oo gaba gabada tababarka hadal ka jeediyey ayaa sheegey in dhalinyarada wariyaasha ee fursada u heley tababarka ay ahaayeen kuwo u diyaarsanaa tababarka islamarkaana Hay,adda IMS iyo FOJA ka fikiri doonaan tababaro kale si Wariyaasha kale uga faa,iideystaan.
Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Koonfur Galbeed Maxamuud Maxamed Kheyre waxaa uu ku amaaney SOMA sida ay tababarkan usoo qaban qaabisey iyo sida Wariyaasha qaar uga keeneen Degmooyinka kale,waxaana uu ku booriyey wariyaasha in wixii ay barteen ku dhaqmaan.
Wasiirka Wasaarada Warfaafinta Koonfur Galbeed Ilyaas Saciid Qalinle oo soo xirey tababarka ayaa waxaa kula dardaaramay Wariyaasha in ay ku camalfalaan,islamarkaana wariyaasha Warbaahinta ay joogaan wax uga badelaan hab tabintoodii hore,iyagoo ku dabaqaya tababarka iyo wixii ay ka barteen.
Gaba gabadii Wariyaasha ayaa lagu gudoonsiiyey shahaadooyin,iyadoo tababarka iyo howshii SOMA ee Baydhabo jawi degan kusoo dhamaatey.
SOMA oo soo gabagabeysay Tababar u qabatay Wariyayaasha Koofur Galbeed (Sawiro) was last modified: January 14th, 2021 by Admin